“Haddii uu dib ugu laabto Coutinho kooxda Liverpool, wuxuu kala kulmi doonaa cadaadis badan” – Rivaldo – Gool FM
“Haddii uu dib ugu laabto Coutinho kooxda Liverpool, wuxuu kala kulmi doonaa cadaadis badan” – Rivaldo
(Spain) 19 Luulyo 2019. Halyeeyga reer Brazil iyo kooxda Barcelona ee Rivaldo ayaa kaga digay xiddiga ay isku wadanka kasoo jeedaan ee Philippe Coutinho suurtogalnimada uu ula kulmi karo cadaadis badan hadii uu go’aansado in markale uu dib ugu laabto kooxdiisii hore ee Liverpool.
27 jirkan ayaa yimid kooxda Barcelona bishii janaayo ee 2018, kaddib markii uu kaga soo wareegay Liverpool qiimo dhan 145 milyan euros.
Laakiin ilaa iyo haatan, kubadsameeyaha reer Brazil ayaan sameynin qaab ciyaareedkii ay ka fileysay kooxda Barcelona, taasoo ka dhigeysa in Blaugrana ay ku fikirto iibkiisa suuqan xagaaga.
Wargeysyada Isbaanishka iyo kuwa England ayaa soo wariyay suurtogalnimada Philippe Coutinho uu markale dib ugu laaban karo kooxda Liverpool inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga.
Hadaba halyeeyga reer Brazil iyo kooxda Barcelona ee Rivaldo oo ka hadlay xaalada Philippe Coutinho ayaa wuxuu kaga digay inuu go’aansado in markale uu ku laabto Liverpool wuxuuna yiri:
“Qof walba wuu ogyahay in Philippe Coutinho qaab ciyaareedkiisii ugu fiicanaa uu ku soo bandhigay kooxda Liverpool, mar walbana waxaan u maleynayay in sidaas oo kale uu ka sameyn doono Barcelona, balse xaalada sidaas ma aysan noqonin”.
“Suurtogalnimada uu dib ugu laaban karo kooxda Liverpool waxaa laga yaabaa inay faa’iido u leedahay isaga, balse ma hubo inuu ku fikirayo dib ugu laabashada kooxdiisii hore”.
“Wuxuu sii joogi karaa Barcelona si uu isugu dayo in qaab ciyaareedkiisa uu sare u qaado, wuxuu ka soo laabtay Brazil isagoo ku soo guuleystay Copa America, waxaana hubaal ah inay taasi siin doonto kalsooni badan, sidaas darteed way adagtahay in la sheego inuu joogi doono ama uu bixi doono”.
“Runtii waxaan ixtiraam buuxa u hayaa Philippe Coutinho, waa ciyaaryahan wanaagsan, waxaana qabaa inuu heysto wakhti uu ku muujin karo heerkiisa dhabta ah ee kooxda Barcelona xilli ciyaareedka soo socda”.
“Laakiin hadii uu runtii go’aansado inuu ku laabto Liverpool, wuxuu la kulmi doonaa cadaadis badan, gaar ahaan kaddib markii ay Liverpool ku guuleystay Champions League”.
Marcos Alonso oo ka hadlay mustaqbalkiisa kooxda Chelsea, kaddib imaatinka Frank Lampard
Neymar Jr oo u doortay xiddig ka tirsan Real Madrid inuu yahay kan ugu fiican uu wajahay